🥇 ▷ Sawirada dhabta ah ee Motorola One Zoom: mobilkii ugu horreeyay oo leh afar kamaradood oo sumadda leh ✅
Sawirada dhabta ah ee Motorola One Zoom: mobilkii ugu horreeyay oo leh afar kamaradood oo sumadda leh
Motorola wuxuu qorsheynayaa inuu sii wado bilaabida “Mid” taleefannada qoyska inta lagu gudajiray sanadka labaad. Xusuusnow in Motorola One Action dhowaan la soo bandhigay, Terminal xiiso leh oo leh waxyaabo la mid ah aragtida Motorola One Vision laakiin waxaa lagu bilaabay qiimo ka jaban. Hadda waxaan aragnay oo keliya sawirada dhabta ah ee ugu horeeya ee Motorola One Zoom, soosaarida weyn ee soo socota ee Motorola iyo midka noqon kara mid ka mid ah taleefannada ugu jaban oo leh afar kaamirooyin gadaal ah.
Motorola waxay ku kala duwanaaneysaa midkeeda weyn iyadoo la soo bandhigayo taleefannada bartamaha-dhexe oo leh astaamo waaweyn oo si wanaagsan u kala duwan. In kasta oo dhammaantood ay leeyihiin astaamo badan oo ka badan ama ka yar, aaladda hoose ee aaladda loogu talagalay in ay ka soo baxdo. Qaabkan, Motorola One Vision waxaa loo magacaabay ka dib markii la qabtay mid ka mid ah Hababka Habeenki ugu awoodda badnaa ee dhex-dhexaadka. Si la mid ah, Motorola One Action ee dhawaanta la soo bandhigay wuxuu leeyahay 117 ° dhinac ballaaran oo dhinac ah iyo qaabab xasilinta si loo sameeyo tallaallo ka sii fiican ama lagu duubo dhacdooyinka cayaaraha.
Astaamihiisa ugu weyn
Sidan, waxaan ognahay jiritaanka Motorola One Zoom, kaasoo si isku mid ah u faafaya sida walaalihiisa oo soo bandhigaya rasmiga ah loo sii hayn karo IFA ee Berlin. Sida magaca macnaheedu yahay, maddaarka wuxuu yeelan doonaa qaabeyn afar kamaradood gadaal ah, oo leh a 48 megapixel sensor ugu weyn kaas oo ka muuqan doona Dual OIS xasilinta indhaha. Waxay kaloo lahaan doontaa labo kale seddex + 16 + 8 + 5 megapixel sensoor. Kaameeradda hore, oo ka duwan tan ay walaalaha yihiin One Vision iyo One Action, ayaa lagu hagi doonaa meel dhibic ah waxayna gaari doontaa 25 megapixels. Qaab-dhismeedkani wuxuu bixin doonaa awoodda lagu qabanayo zoom indhaha ilaa 3x iyo zoom hybrid illaa 5x. Sidookale, mid kamid ah wuxuu awoodi doonaa inuu bixiyo xagal 13mm xagal ballaadhan iyo qaab sawir ah. Codsiga kamaradku wuxuu lahaan doonaa qaab habeen ah, hagaajinta zoomka, soo-gaadhista, iyo sidoo kale dib-u-wajiga wajiga oo loogu mahadcelinayo macmiil cusub oo adeegsade. Waxaa la filayaa in Motorola One Zoom uu fulin karo zoom optical ilaa 3X iyo zoom hybrid ilaa 5XSidaa darteed, zoomka dhijitaalka ah ee aaladda ayaa loo badinayaa inuu gaaro ugu yaraan 10X.
Faahfaahinta kale ee farsamo ee la sifeeyay waxay muujinayaan inay la imaan doonto Snapdragon 675 oo ay la socdaan 4 ama 6 GB oo RAM ah iyo kayd gudaha ah oo ay la socoto farsamada UFS 2.1 ee 64 ama 128 GB. Waxay yeelan kartaa shaashad 6.2 inji AMOLED ah oo leh xallin FullHD + ah (1080 x 2340 pixels), shaashad isku dhafan oo ah shaashadda iyo batteriga 4,000 mAh.
In kasta oo aan horay u haysanay rer saxaafadda soo saaray oo muujinaya qaabkeeda, haddana waa markii aan awoodnay inaan aragno sawirradeedii ugu horreeyay ee muuqaal ah. Iyaga dhexdooda waxaan ku aragnaa mitirka dambe iyo gadaal, oo kor ku xusan afar kamaradood, astaamaha Motorola iyo magaca Android One ee hoosta. Shaashadda ayaa ka muuqata oo waxaad arki kartaa interface nadiif ah iyo codsiyada Google ee caadiga ah. Haddii aad raacdo xariiqda illaa iyo hadda la calaamadeeyay, Motorola One Zoom wuxuu noqon karaa mid ka mid taleefannada ugu rakhiisan oo leh afar kaamirood oo suuqa ku jira, haddii aan tixgelinno in qiimaha Motorola One Vision uu yahay 299 euro iyo midka Motorola One Action ee 279 yuuro. Si kastaba ha noqotee, dhawaac dhowaan ka dhacay Amazon ayaa hoos u dhacay qiimaha terminalka Waxay noqon kartaa ku dhawaad ​​400 euro.